चिलिमे जलविद्युतको प्रमुख कार्यकारी अधिकृतमा मिश्र नियुक्त - नुवाकोट एक्स्प्रेस : मोफसलकै लोकप्रीय डिजिटल एक्स्प्रेस
चिलिमे जलविद्युतको प्रमुख कार्यकारी अधिकृतमा मिश्र नियुक्त
‘अहिले पनि म कुलेखानी तेस्रो कै काममा व्यस्त छु, ’उनले भने, ‘प्राधिकरणबाट पत्र बुझ्न आउनु भन्ने खबर पाएको छु । सम्भव भएसम्म आजै पत्र बुझ्छु ।’ उनले आज पत्र बुझे पनि केही दिनपछि मात्रै पदभार ग्रहण गर्ने बताए । अझै एक साता कुलेखानी तेस्रोको काम गर्ने बताए ।
कुलेखानी तेस्रो चिनियाँ ठेकेदारले प्राधिकरणलाई हस्तान्तरण गर्न बाँकी छ । चिनियाँ टोली आएर केही उपकरणको परीक्षण गरेपछि औपचारिकरुपमा आयोजना हस्तान्तरण हुने उनले बताए । मिश्रलाई चिलिमेअन्तर्गत निर्माणाधीन २ सय ७० मेगावाटका आयोजना सम्पन्न गर्ने तथा नयाँ आयोजनाको निर्माण प्रक्रिया अघि बढाउने जिम्मेवारी छ । मिश्रले २०५१ सालमा इन्जिनियरको रुपमा ७ तहबाट विद्युत प्राधिकरणमा सेवा सुरु गरेका थिए ।
फेरी बढ्यो सुनको मूल्य, तोलाको कति पुग्यो?
ह्वात्तै घट्यो प्याजको मूल्य, किलोको कति पुग्यो ?
सुनचाँदीको मूल्य आजपनि घट्याे
शेयर बजारमा कालो धन रोक्न नयाँ व्यवस्था